ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကျောက်တုံး ပုံပြင်”
ကျောက်တုံးကြီးဘယ်တော့ အလိုလိုနေရာရွေ့မှာပါလိမ့် .. ???????
Revolution already occured in our country.The leaders could not lead the people to get success.It is impossible that everyone has political knowledge. I think now is the time to choose evolution. This is just my opinion.May be wrong. Thanks Ko Paw
ဟီ.. ဘီလူးကို တနာရီတိုင်း ခဲ ဆယ်လုံးလောက် ပစ်ကြည့် တာ မဟုတ်ဘူး။ :P
>>>မိုးခါး…. ဘီလူးသက်တမ်း ကုန်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ ရွေ့ကောင်းရွေ့ပါမယ်။ အခုတော့ နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်တာတောင် ကျောက်တုံးပေါ်က ဘီလူးက ပါမသွားဘူး။ တွန်းနေတဲ့သူတွေပဲ ပါသွားတယ်။
>>>Anonymous…. အီဗော်လူးရှင်းနဲ့သွားရင် ရှေ့ကိုမတိုးဘဲ နောက်ကို ပြန်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ်။ နောက် အနှစ် ၂၀ ဆိုရင် ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေ လန်ကွတ်တီ ၀တ်နေရကိန်းရှိတယ်။
>>>နေညိုရင့်…. ဘီလူးက ခဲလုံးလောက်တော့ ပန်းနဲ့ပေါက်သလိုပဲ…ယားတယ်… ခစ်ခစ် …တဲ့။း-)
I ama1st kind of man as per your story.
(I don't want to talk that I am not in Myanmar.)
WHAT'S GOING ON..HERE..?
ကျောက်တုံးနားက အရူးမ ဒေါ်ဘုမ ကြီးက ကပ်လာတဲ့လူ မှန်သမျှ လှန်လှန် ပြနေရင်လည်း လူတွေက အဲ့နားကပ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး .. သတိလည်းထားဦး (ဒေါ်ဘုမကြီး ပြောပါတယ်.)
ကျောက်တုံး အရမ်းကြီးလို့ ၀ိုင်းတွန်းလို့မရရင်း ဒိုင်းနမိုက်နဲ့ခွဲပြစ် ရမယ်၊ အဲဒီလိုခွဲတဲ့အခါ ယမ်းအားကောင်းကောင်းသုံးရမယ်၊ အဲဒါမှကျောက်တုံးရော ဘေးက အာ နေတဲ့သူတွေရော ရှင်းသွားလိမ့်မယ်...
Ko Paw, you hit them again. Some simply can't take it. :D
ပုံပြောကောင်းတဲ့ ကိုပေါကရော ဘယ်ထဲပါလဲဟင်။ ကိုပေါပြောတဲ့ပုံပြင်အရဆိုရင် ကျောက်တုံးကို ၀ိုင်းတွန်းတဲ့သူတွေထဲမှာတောင် ရည်ရွယ်ချက်မတူပဲ ကွဲနေတာတွေ့ ရ
တယ်။ ဆုလိုချင်လို့ တွန်းသူရယ်၊ အမှန်စေသနာနဲ့ တွန်းသူရယ်။ ဒီလိုပဲ မရွေ့ တဲ့လူတွေ
မှာလဲ ကွဲနေနိုင်တာပဲ။ ဆုမလိုချင်လို့ မရွေ့ သူ၊ လမ်းက သူ့ အတွက်သွားလို့ ဖြစ်နေသေး
လို့ မရွှေ့ သူ၊ ကြာပွတ်ကြောက်လို့ ၊ ကြာပွတ်စာမိပြီး ကြွသွားရင် ငဲ့ရမဲ့ မိဖဆွေမျိုးတွေ
ကြောင့်၊ ကျောက်တုံးပိတ်နေလေ သူတို့ အတွက်ပိုကောင်းလေဖြစ်နေလို့ စသဖြင့်ပေါ့။
နောက်ကျောက်တုန်းကိုရွှေ့ ကြရာမှာလည်း လူကိုယ်တိုင်အားနဲ့ တွန်းမှရွေ့ မှာလား။ ကျောက်တုံးကမှော်ကျောက်တုန်းဆိုရင်တော့ လွယ်လွယ်ကူကူရွေ့ သွားနိုင်မယ့် password တစ်ခုခုလည်းရှိနေနိုင်တယ်။ အဲဒါကိုမသိပဲ သေအောင်တွန်းနေလဲ ရွေ့ မှာမှမ
ဟုတ်ပဲနော်။ ကိုပေါရဲ့ ပုံပြင်တွေနားထောင်စဉ်းစားသူသာဖြစ်ပါတယ်။
watasimplified world view.. :)
great post, BeLuu lae anatesa par pae. :D
ပြိုင်တူ တွန်းလျှင် ရွေ့နိုင်ပါသည်။
(ငယ်ငယ်တုန်းက ဖတ်စာလေး ပြောပါတယ်)
တွန်းဖို့တော့ စိတ်မ၀င်စားပါ။ တခုပဲ သိချင်တယ်။ အဲဒီ ကျောက်တုံးရွေ့သွားပြီးရင် အဲဒီကျောက်တုံးနေရာကို ဘယ်သူလာမှာတဲ့လဲ။
အ ကိုလေး ကို ပေါ ရေ၊ ဘီ် လူးကတော့ ကြာပွတ် ကုန်အောင်ရိုက်မှာ ပါ၊ ကြာပွတ် ထပ် ပေး မဲ့သူတွေ ပေး လို့ မရ အောင် ဘေးလူတွေ ပွဲဆူပေးကြပေါ့။
အဟဲ...ကြာပွတ်ကြောက်လို့တော့ ဟုတ်ပါဝူးဂျာ။ ကျောက်တုံးကြီးဘေးက ကပ်သီးကပ်သပ် ကွေ့ဝိုက်ပြီး လမ်းလျှောက်ရတာ ကျင့်သားရနေတော့ ကျောက်တုံးကြီးမရှိတော့ရင် လမ်းဖြောင့်ဖြောင့် လျှောက်ရတော့မှာ စိုးရိမ်လို့ပါဂျာ။ နှစ်လေးဆယ်ကျော်လာတော့ အဲဒီကျောက်တုံးကြီးကိုတောင် သံယောဇဉ်တွယ်လာသလိုပဲဂျ။ မတွန်းပရစေလားနဲ့ဂျာ။ မှန်သောစကားပြောရရင် ကြာပွတ်ကြောက်လို့ ဟုတ်ဝူးနော်။ မတွန်းရက်လို့။ ကြောက်လို့ဟုတ်ဝူး သိလား။
အဟဲ...ပြောဖို့ မေ့သွားလို့။ ကျောက်တုံးပေါ်က ဘီလူးကြီးကိုလည်း အောင့်ကာနမ်းလာတာ ကြာလာတော့ ချစ်လာသလိုလိုပဲ။ တကယ်တော့ ဘီလူးကြီးက စိတ်ထားမှန်မှန်နဲ့ချစ်တတ်ရင် ချစ်စရာကြီးပါဂျာ။ မယုံရင် ကိုလမ်းသစ်ကို မေးကြည့်။
အဟီး…. ချောဒီး…. ချောဒီး….. ပုံပြင်ထဲမှာ အချက်အလက်တခု အမှားပါသွားတယ်။
တကယ်တော့ လမ်းမပေါ်မှာ ပိတ်ဆို့နေတာ ကျောက်တုံးကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ တာဝန်သိ ပြည်သူတဦးရဲ့ သတင်းပေးချက်အရ အဲဒါဟာ လမ်းကြိတ်စက်ကြီးတစင်း ပျက်နေတာပါတဲ့။
အပေါ်ကနေ ကြာပွတ်နဲ့ ရိုက်နေတာဟာလည်း ဘီလူးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ လမ်းကြိတ်စက် မောင်းသမားသာ ဖြစ်ပါသတဲ့။
တကယ်တော့ ကိုလမ်းသစ်ပြောသလို နအဖက လမ်းကြိတ်စက်မောင်းသမားဗျ။ ယနေ့တပ်မတော်ကတော့ လမ်းကြိတ်စက်ကြီးပေါ့ဗျာ။ အဟဲ...ကျောက်တုံးကြီးကို တွန်းဖယ်ဖို့ လမ်းပေါ်ထွက် ကြိုးစားသူရှိတိုင်း နအဖက လမ်းကြိတ်စက်ကြီးနဲ့ လိုက်ကြိတ်တော့တာပါပဲဗျာ။ ကျောက်တုံးကြီးကို ကြိတ်တာတော့ဟုတ်ဘူး။ ဘာကိုကြိတ်တယ်ဆိုတာ နအဖရဲ့စေတနာအမှန်ကို နားလည်ရင် သဘောပေါက်ပါတယ်။
ကျောက်တုံးကို လူတွေက သမားရိုးကျ တွန်းနေတာ အတော်ကြာပြီ။ တုတ်တုတ်တောင်မလှုပ်တော့ တချို့လည်း အားကုန်လာကြတယ်။ တချို့လည်း နားကြတယ်။ တချို့လည်း ကျောက်တုံးကို ဆက်ကိုင်ထားတယ။် ကျောက်တုံးဆက်တွန်းနေသူတွေကို ထမင်းအလကားကျွေးမယ် ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်တွေ ပေါ်လာတယ်။ တချို့က ကျောက်တုံးရွှေ့သွားရင် ထမင်းအလကား မစားရမှာ စိုးလို့ ကျောက်တုံးကို တွန်းမလိုလိုနဲ့ အသာလေး ဆွဲထားကြတယ်။ တချို့ကတော့ အားစိုက်ခွန်စိုက် တကယ်တွန်းနေတုန်းပဲ။ တွန်းတဲ့အထဲမှာလည်း ရှေ့နားက ပိုလေးလံ အပင်ပန်းခံ တွန်းရသူတွေ နောက်ကနေ လက်ဖျားလေးထိရုံ တွန်းပေးရသူတွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ဒီအချိန်မှာ နားနေသူတွေ ဆက်မတွန်းတော့တဲ့လူတွေကို ကျောက်တုံးကို ကိုင်ထားတဲ့ လူတွေထဲက လူတစ်စုက လှောင်ပြောင်သရော် ကဲ့ရဲ့တယ်။ ဘေးကရပ်ကြည့်နေသူတွေကိုလည်း ခင်ဗျားတို့က ဘာအသုံးကျလို့လဲ ခင်ဗျားတို့ ၀င်မလုပ်လို့ မရွေ့တာလို့ ရန်တွေ့တယ်။ ကြာပွတ်ကို နာလို့ ကြောက်လို့ ပြေးတဲ့အပြင် အဲဒီ ရန်တွေ့တာကို တချို့စိတ်ဆိုးပြီး ထွက်သွားကြတယ်။ တချို့က စိတ်ကုန်ပြီး ထွက်သွားကြတယ်။ တချို့က ကြောက်လို့ ခပ်ဝေးဝေးကို ပြေးသွားကြတယ်။ ကျောက်တုံးတွန်းဖူးတဲ့ လူတချို့ကတော့ တွန်းတာရပ်ပြီး ကျောက်တုံးကို ဘယ်လို ရွှေ့ရမလဲ ဆိုတာတွေ သွားလေ့လာတယ်။ ပြီးတော့ တခြားနည်းလမ်းရှာကြဖို့ လာပြောတယ်။ ကုတ် နဲ့မပြီး ရွှေ့ရင် ပိုထိရောက်မှာ ဆိုတာမျိုး နည်းလမ်းအသစ်တွေ တိုက်တွန်းတယ်။ အခု သမားရိုးကျ လုပ်ပုံလုပ်နည်းက အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိမရှိ ပြန်စဉ်းစားခိုင်းတယ်။ ရွှေ့ပုံရွှေ့နည်းကို ပြောင်းပြီး စဉ်းစားဖို့ တနေ့ကို ဘယ်လောက်ရွှေ့မယ် ဘယ်နေ့အပြီးရွှေ့မယ် ဆိုတာတွေကို သတ်မှတ်ပီး တကယ်ထိရောက်အောင် စနစ်တကျ အလုပ်ဆန်ဆန် လုပ်ကြဖို့ပြောတယ။် စောစောက လူတစုက အဲဒီအကြံပေးသူတွေကို မင်းတို့က သစ္စာဖောက် ယုံကြည်ချက် ပျက်တဲ့ကောင်တွေဆိုပြီး ၀ိုင်း သမ လိုက်ကြတယ်။
သြော်…. ယုံကြည်ချက်… ယုံကြည်ချက်…. တယ်လဲ စိတ်ကုန်လွယ်၊ စိတ်ဆိုးလွယ်ကြီးပါလားနော်။
ခံယူချက်လေးကတော့ ကောင်းပါတယ် .. ဆရာကြီးပုံဖမ်းနေတာဆိုးတယ်နော်..
တိုက်တွန်းတယ်ဆိုပြီး ဘေးကထွက်ထိုင်နေတာထက် ကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်နေတာ ပိုထိရောက်တာမဟုတ်ဘူးလား။
ကုတ်နဲ့မ သင့်တယ်ဆိုလဲ ကိုယ်တိုင် စတင်လုပ်လေ။
ထိရောက်တဲ့ နည်း၊ ဒါမှမဟုတ် နည်းလမ်းသစ်ဆိုလဲ ကိုယ်တိုင်ကပဲ စရမှာပေါ့။ ခုတော့ သူတို့က ငါတို့ကိုပြောလို့ စိတ်ဆိုးနေတာ ပါးနပ်ပစ်တာကတော့ ...
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သူ့လောက်မသိတော့ စိတ်ထဲက ဆရာ တင်မိတာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
>>>အမည်မသိ…. သိသားပဲ။ “တိတ်ဆိတ်ခြင်း၏ အသံ” ဆိုတာ စာရေးဆရာမ ဂျူးရဲ့ နာမည်ကျော် ၀တ္ထုတို တပုဒ်လေ….. ဟား ဟား (နောက်တာပါ)။
“စကားမပြောပဲနေခြင်းကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက မချီးမွမ်း။ “သင်တို့သည် မချမ်းသာပဲလျှက် ချမ်းသာစွာနေရသည်ဟု ဆိုကြ၏”ဟု အပြစ်တင် လေသည်။ စကားမပြောပဲနေခြင်းအား နွား၊ ဆိတ်တို့ကဲသို့ တိရစ္ဆာန်တို့၏ နေခြင်းဟု ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချ၏။ တိတ္ထိတို့၏ ‘မူဂဗ္ဗတ’ ခေါ် စကားမပြော, တုံဏိဘာဝေဆိတ်ဆိတ်နေသော အကျင့်မျိုးကို ကျင့်၏ ဟုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ခြ၏။ ရဟန်းတို့သည် ဤသို့ စကားမပြောသော အကျင့်ကို မကျင့်အပ်။ ကျင့်ပါက ဒုက္ကအာပါတ် အပြစ်သင့်သည်ဟု ပညတ်တော်မူသည်။ စကားမပြောသော လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် တိရစ္ဆာန်အုပ်တို့နှင့် မခြားတော့သော အန္တရာယ်ကြောင့် ဖြစ်သည်။” (Sonata-Cantata ဘလော့ဂ်မှ)
တိတ်ဆိတ်ခြင်းရဲ့အသံဆိုလို့ Simon And Garfunkel တို့ရဲ့ The Sound of Silence သီချင်းကို သတိရမိတယ်။ သီချင်းစာသားတချို့ကတော့
ကျနော့်အမြင်ကတော့ တိတ်ဆိတ်ခြင်းရဲ့အသံဆိုတာ သူရဲဘောကြောင်ခြင်းရဲ့သတ္တိတို့၊ ရိုးသားတဲ့လိမ်လည်မှုတို့နဲ့ ဆင်တူမယ်ထင်တယ်။
i really worried abt u all.. coz u all have very simplified world view and some believe in utopia too.
u all believe that as long as Myanmar becamea'democracy country', u all will have good government, isn't? haha..
btw.. how many of u believe in utopia? Utopia isaplace where everybody live equally and peacefully. Justice is served rightly. U have good government as long as u have democracy. :)
Well, I think everybody here is at least as smart as you are to know whatautopia is. Anyway, thanks for defining it.
I don't see anybody has ever said that democracy isautopia. I just wonder how you drew your simplified conclusion. Maybe it's because you haveasimplified understanding of utopia.
>>>မျိုးမြင့်မောင်..... I believe your old friend (Anonymous 6:50 pm) is regarding Singapore asautopia. :-)
In that case, I think maybe he mistakes Topayoh for Utopia. :D
Actually, this Guy's quite stupid...
But fun loor..?
MMM and KP,
haha . i think i hit the right place, do i? :)
Right place indeed! Man, you hit your empty head. :)
Dear Myo Myint Maung,
Can I take your comment dated 30th Apr.2009 5:33PM.
There isasong " Simon And Garfunkel တို့ရဲ့ The Sound of Silence." that I like.
I stopped commenting long ago but this one deserves it. I readabook byaChinese doctor (trained in UK and practised in US, she became an author and wrote "Falling Leaves : the true story of an unwanted Chinese daughter", in that book, she told about such dreamy people, she was in UK, working towards her MBBS, the president of the Chinese student union wasaPhD candidate studying at Imperial College, UoL, so that chap was pro communist and he always told and incite his friends that China was suddenly changed under Chairman Mao. That Tsai is/was the son ofarich Hongkong tycoon but he wasaliberal dreamer under the influence of red/pink Brits. So asagirl, barely 19 years old, she naively narrated back to her 40 olds boyfriend escaped from East European communist utopia. The chap retorted her, brought her down to reality in life that do not swallow those craps, once Mao Ze Tong took charge, China will not becomeaparadize in one day, all Chinese will not become saints suddenly. I have been through those craps and I know it. That was in 50s.
Fast forward to 2009, above words hold true, if you change the words Chinese to Burmese, Chairman Mao to Daw Aung San Su Kyi. Daw Su is smart, sincere but once putting her in power or share with current ruling generals will not fix the problems. Burmese are not saints, sometimes victims make villains more vicious. So victim is not blameless either and simplification and modeling is good but oversimplification (as you did) is bad.
The morale of the story is dont believe politician s..kers.
May 1, 2009 at 4:18 PM
မာရီယိုဂိမ်းကစားဘူးတယ် မဟုတ်လား .. ဘီလူးကြီးနဲ့တွေ့ရင်ဘာလုပ်မိတတ်ကြလဲ...
ရှင်းနေတာကို ရှုပ်အောင် လုပ်နေကြတယ်...
Feel free to take the comment if you like.
May 2, 2009 at 11:02 PM
To Anon @ 4.14 PM:
I think you should blame the victims of rape for not being strong enough to resist the rapists. Also, say that rape by any means isacrime is an oversimplification.
May 2, 2009 at 11:08 PM
All I want is Burmese students in overseas to become aware of political crooks who want to use them. I dont think Burmese government is manned or led by saints, at the same time I do not think opposition (in exile) is better than the government they claimed to be fighting.
I despise both. Your simplified stories might incite young minds from following wrong leads.